mpamatsy tariby tsara indrindra any Shina | Noyafa
NOYAFA Electronic manokana amin'ny fitaovana fitiliana sy tester cable mandritra ny 15 taona
Fitaovana fibre optic
Fibre Optical Multimeter
Fandrefesana faritra lavitra
Ny manam-pahaizana momba ny wiring anao dia mahafantatra izay ilainao
Shenzhen Noyafa Electronic Co., Ltd dia manam-pahaizana manokana amin'ny fitaovana fitiliana sy tester cable mandritra ny 15 taona
miaraka amin'ny traikefa ODM / OEM manankarena ho an'ny marika malaza maro manerana izao tontolo izao!
Ny tena vokatray: Wire tracker, LCD cable tester, Cable length tester, CCTV monitor tester, Underground wire locator, Laser range finder ary fitaovana fitiliana hafa.
Best NOYAFA multifunction LCD tariby halavan'ny tester FactoryPrice-NOYAFA
NF-868 endri-javatra:1. Andrana misokatra, fohy, lakroa, fifandraisana mivadika ary tariby tapaka toerana.2. Mahay mandrefy ny halavan'ny tariby tambajotra, tariby coaxial, tariby telefaona ary tariby USB.3. Mba hahitana haingana ny tariby na tariby kendrena amin'ireo karazana tariby.4. Anti-intecference rehefa mijery tariby amin'ny exchanger na ny router. 5. Fomba roa scan: oridinary switch /PoE switch. 6. Ny fiasan'ny fitahirizana sy fitadidiana ho an'ny angona calibration.7. Fanemorana mandeha ho azy ny herin'ny on-off sy ny jiro lamosina.
NOYAFA Network Cable Tester NF-8108M ho an'ny tariby lan
NOYAFA Network Cable Tester NF-8108M ho an'ny LAN CableOverviewNF-8108M dia tambajotra cable tester, izay ahitana ny tester (NF-8108), ary 8pcs remote identifier. .Mihatra amin'ny tambazotra informatika sy sehatra hafa izy io.
Noyafa ambanin'ny tany mora miasa Multifunction NF-820 cable locator
Endri-javatra lehibe: ● Fantaro ny toerana misy tariby ao anaty any ambanin’ny tany na tariby tsy hita maso hafa, 0-2m ny elanelana. ● Ny fahatsapan-tena ho an'ny mpandefa sy ny mpandray dia azo amboarina. (0-2m) ● Mora arahina miaraka amin'ny fandavana ny fitsabahana AC feno Tombony: Earphone dia manampy amin'ny fiasana amin'ny tontolo mitabataba. ● Cable lead sy socket dia azo ampiasaina miaraka. ● Function indicator batterie ambany. ● Batterie Lithium rechargeable ho an'ny émetteur.
NOYAFA NF-8209 LCD Display Fandrefesana Length Lan Cable POE Wire Checker Cat5 Cat6 Lan Test Network Tool Scan Cable Wiremap Tester
Famaritana ny vokatra: NF-8209 dia taranaka vaovao manolotra famantarana nomerika sy analogue ao anaty tambajotra iray toner sy probe. Izy io dia manana fomba telo ahafahana manara-maso tariby toy ny maody nomerika, maody analog ary maody PoE. Midika izany fa fitaovana amin'ny teknolojia toerana misy tariby mahery indrindra ho an'ny tontolon'ny asa rehetra. Ary koa, misy ny fandrefesana ny halavan'ny tariby, ny fitsapana ny fahadisoana amin'ny tariby, ny fitsapana PoE, ny blink ary ny fiasan'ny NCV, izany rehetra izany dia mahatonga azy io ho fitaovana ilaina ho an'ny injeniera cabling. Fampiasana vokatra1. CONT-- Andrana misokatra, fohy, lakroa, sns ho an'ny STP, tariby UTP.2. Length--fandrefesana ny halavan'ny lan cable, isan-karazany dia 2.5m ~ 200m.3. Scan--Analog/Digital/PoE fomba hahitana tariby lan.4. PoE-- azo ampiasaina ho an'ny switch PoE mahazatra na tsy manara-penitra (5 ~ 60V), fantaro ny fenitra AT na AF amin'ny karazana PSE. 5
Raha tsy mahita vokatra ivelan'ny talantalana mety amin'ny tetikasanao ianao dia andramo ny fanampian'ny serivisy fanaonana matihanina NOYAFA.
Noyafa dia manana R&D departemanta misy logiciel& injeniera fitaovana, injeniera bobongolo. noho izany, ODM& Ny serivisy OEM dia azo ekena ho antsika. Amin'ny ankapobeny, tian'ny mpanjifa ny mampifanaraka ny sariny manokana amin'ny efijery na marika, boaty loko, boky mpampiasa, na baoritra.
Ho an'ny mpanjifa sasany, mbola mila manomana fiteny samihafa amin'ny fitaovana izy ireo, toa an'i Alemaina, Poloney, Rosiana, Tiorka, Koreana, sns. Ny injeniera rindrambaiko dia afaka mamerina fandaharana sy manolotra fiteny maro ho an'ny mpanjifa. Amin'ny maha mpanamboatra cable tester, noyafa cable tester, mahazo ny fahatokisan'ny mpanjifa amin'ny vokatra tsara.
Manaiky ny baiko OEM sy ODM miaraka amin'ny matihanina R& Ekipa D sy ekipa serivisy aorian'ny varotra.
Fifehezana ny vidiny
Ny vidin'ny fanaraha-maso, tsy mihoatra ny tetibola, dia mahatonga ny vokatra hifaninana kokoa amin'ny tsena.
Ny vokatra rehetra vokarinay dia nandalo ny fanaraha-maso ny kalitao, mahafeno ny filana.
Faritra indostrialy manokana
Ny faritra indostrialy "Noah fomba" dia manana mihoatra ny 20000 metatra toradroa.
Tsy ny atidohanao ianao
Izy rehetra dia amboarina araka ny fenitra iraisam-pirenena henjana indrindra. Nahazo sitraka avy amin'ny tsena anatiny sy ivelany ny vokatray. Ankehitriny dia manondrana any amin'ny firenena 200 izy ireo.
SHENZHEN NOYAFA TECHNOLOGY CO., LIMITED dia mpanamboatra fitaovana fitiliana ho an'ny sehatry ny cabling any Shenzhen, Shina.
Izahay dia manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana sy ny fivarotana ny tambajotra fifandraisana fitiliana, Integrated wiring sy instrumentation products.Ny tena vokatra dia Wire tracker, LCD cable tester, Cable halavan'ny tester, CCTV fanaraha-maso tester, POE checker, Underground tariby locator, Laser isan-karazany Finder sy fitaovana fitsapana hafa.
Taorian'ny 15 taona ny fampandrosoana, dia namorona be dia be ny traikefa amin'ny varotra sy ny varotra taorian'ny varotra ekipa. Mpanamboatra sy mpampiasa amin'ny fananganana ny laza avo dia avo. Amin'izao fotoana izao, ny vokatra dia aondrana manerana izao tontolo izao, indrindra fa any Eoropa, Azia. N'aiza n'aiza na oviana na oviana, ny mahafa-po ny mpanjifa no fikatsahantsika sy tanjona mandrakizay.
Amin'izao fotoana izao, ny vokatra dia aondrana manerana izao tontolo izao, indrindra fa any Eoropa, Azia. Na aiza na aiza na rahoviana, ny mpanjifa 'fahombiazana dia ny fikatsahana mandrakizay sy ny tanjona.
Noyafa dia nanao ela & tsara fiaraha-miasa amin'ny Prokit's Industries Co., LTD hatramin'ny 2012. Ny varotra isan-taona dia 500 tapitrisa USD, indrindra famatsiana tariby tester, tariby tariby locator sy ambanin'ny tany tariby tracker.AmazonAmazon dia iray amin'ireo lehibe mpiara-miasa amin'i Noyafa. Manana mpaninjara Amazon maro izahay. Ny andian-dahatsoratra dia ahitana ny tariby ambanin'ny tany, tariby tester, PoE cable checker, tariby detector, laser rangefinder. Ny mpivarotra ambony indrindra dia NF-8209, NF-8601S ary NF-488, ny varotra isan-taona dia mety hahatratra 6 tapitrisa USD isan-taona. Mobile Tele Systems（MTS）Nanangana fiaraha-miasa lava sy tsara tamin'ny Mobile Tele Systems tany Rosia nanomboka tamin'ny 2013. TDR lan cable tester, tambajotra tariby locator, ambanin'ny tany tariby detector sns. RBS Telecom（RBS）Ny mpanjifantsika dia mandrakotra ny faritra rehetra amin'izao tontolo izao, Efa nanao fiaraha-miasa lava sy tsara tamin'ny RBS Telecom tany Israely nandritra ny 5 taona, indrindra famatsiana tariby tester, tariby tariby locator. ary tracker tariby ambanin'ny tany.
Fanokafana horonan-tsary fitsapana ho an'ny Noyafa multifunction cable tester NF-8601W Testing Video avy amin'ny mpanjifanay
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpivarotra ambony indrindra amin'ny vokatra rehetra. Ny vidiny sy ny fotoana nitarika ny NF-8601W arakaraka ny habetsahany takiana, ny fahazoana sy ny toerana fivarotana. Afaka manandrana ny fitohizan'ny tariby, ny halavan'ny tariby, ny toerana misy ny tariby, ary ny fitsapana PoE sy PING. Miaraka amin'ny remotes 8 dia afaka manandrana tariby 8 indray mandeha avy eo dia manampy anao hanatsara ny fahombiazan'ny asa. Mba hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra, dia miezaka foana i Noyafa fa tsara indrindra ny manangona ny vokatra rehetra sy ny fepetra takian'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao, miaraka amin'ny fanohanan'izy ireo dia afaka manohy mihetsika isika.
RAHA MANANA FANONTANIANA IANAO, MANORATRA AMINAY